17W « MMWeather Information BLOG
အဆင့်-၃ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGI ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဟောင်ကောင်သို့ ဝင်ရောက်မည်
By mmweather.ygn, on September 22nd, 2013%
အဆင့်-၃ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGI(17W) သည် တရုတ်(ပြည်မ) Guangdong ပြည်နယ် ကမ်းခြေ – ဟောင်ကောင်မြို့၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက်(Bearing 99 degrees) ၂၄၅ မိုင်ခန့်၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် မြောက်ပိုင်းတွင် ဗဟိုပြုနေပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုသည် ယနေ့(စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ ညနေပိုင်း – မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ဟောင်ကောင်မြို့မြောက်ဘက်မှ ကပ်၍ ဖြတ်သန်းပြီး ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်စဉ် မုန်တိုင်းဗဟို၌ လေတိုက်နှုန်း 90 to 110 knots(တစ်နာရီ ၁ဝ၅ မိုင်ခန့်မှ ၁၂၅ မိုင်နှုန်း)အထိ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၄၅ ပေ အထိရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း JTWC မှ သတိပေးချက် အမှတ် . . . → Read More: အဆင့်-၃ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGI ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဟောင်ကောင်သို့ ဝင်ရောက်မည်
2 comments MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းသတင်း 17W, CAT-3, USAGI, စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း, တောင်တရုတ်ပင်လယ် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGI မကာအိုနှင့် ဟောင်ကောင်မြို့များကို ဦးတည်တိုက်ခတ်ရန် သေချာသလောက်ရှိ
By mmweather.ygn, on September 21st, 2013%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်သည့် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGI(17W)သည် မကာအိုမြို့ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၄၅ဝ ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်၌ ဗဟိုပြုနေပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်(Heading 280 degrees)သို့ တစ်နာရီ ၁၂ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့်ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၄း၃ဝ နာရီမတိုင်မီ ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအို မြို့ကြားမှ တရုတ်(ပြည်မ)Guangdong ပြည်နယ် ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ မုန်တိုင်း ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ် မုန်တိုင်းဗဟို၌ လေတိုက်နှုန်း 80 knots မှ 105 knots(တစ်နာရီ ၉၂ မိုင်မှ မိုင် ၁၂ဝ နှုန်းအထိရှိပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟို၌ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၄၈ ပေအထိ ရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် မုန်တိုင်းအရွယ်အစား အချင်း . . . → Read More: စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGI မကာအိုနှင့် ဟောင်ကောင်မြို့များကို ဦးတည်တိုက်ခတ်ရန် သေချာသလောက်ရှိ
One comment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း 17W, super typhoon, USAGI, တောင်တရုတ်ပင်လယ် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အားအနည်းငယ်လျော့သော်လည်း ဟောင်ကောင်သို့ ဦးတည်နေဆဲ
By mmweather.ygn, on September 20th, 2013%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGI(17W) သည် အဆင့်-၄ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ အနည်းငယ် အားလျော့သွားကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဗဟိုသည် ယနေ့(၂ဝ-၉-၁၃) မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ တရုတ်(ထိုင်ဝမ်ကျွန်း) တိုင်ပေမြို့တော်၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၄ဝဝ ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၄၂၅ မိုင်ခန့်၊ တရုတ်(ဟောင်ကောင်)၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် ၆၈၅ မိုင်အကွာ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဗဟိုပြုနေပြီး မူလ ခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ (၂၁-၉-၁၃)နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီ(MST) နောက်ပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကြားမှ ဖြတ်ကျော်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ (ပုံ-၁)
စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ ညပိုင်း၌ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်ခြေအား ဟောင်ကောင်မြို့ အနီးမှ . . . → Read More: စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အားအနည်းငယ်လျော့သော်လည်း ဟောင်ကောင်သို့ ဦးတည်နေဆဲ
3 comments MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း 17W, super typhoon, USAGI စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGI လမ်းကြောင်းနှင့် မုန်တိုင်းလွန်ကာလ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့် တရုတ်(ထိုင်ဝမ်)တို့ကြားမှ ဖြတ်ကျော်ကာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိပြီး ဟောင်ကောင်/မကာအိုကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီနောက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည့် အဆင့်-၅ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းခန့်မှန်းပုံအား အောက်တွင် တင်ပြထားပါသည်။ (ပုံ-၁)
မုန်တိုင်းဟောင်ကောင်သို့ ချဉ်းကပ်လာစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံတို့ အပေါ်တွင် မိုးလျော့နည်းသွားမည့်အခြေအနေ ယာယီဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် ည ပိုင်းမှ စတင်ကာ ဗီယက်နန်၊ လာအိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း(တနင်္သာရီတိုင်း)ဒေသအချို့တွင် မိုးကြီးမည့် အခြေအနေများ ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ပျူတာမော်ဒယ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များတွင် တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ-၂)
စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နောက်ပိုင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် . . . → Read More: စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGI လမ်းကြောင်းနှင့် မုန်တိုင်းလွန်ကာလ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း 17W, super typhoon, USAGI တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ TD-18W နှင့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း 17W
By mmweather.ygn, on September 18th, 2013%
မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြာမှုဦးစီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်မှ ကောက်နှုတ် ဖေါ်ပြချက် နေ့စဉ်မိုးလေ၀သသတင်း (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၂း၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
ယနေ့နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီအချိန်ထိမိုးလေ၀သတိုင်းထွာချက်အကျုဉ်းချုပ်။ လွန်ခဲ့သော(၂၄)နာရီအတွင်းက ကယားပြည်နယ် တွင်နေရာကျဲကျဲ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချူန်းရွာခဲ့ပြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်၍ မိုးကြီးခဲ့ပါသည်။ မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာ သံတွဲမြို့တွင် . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ TD-18W နှင့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း 17W
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း 17W, 18W, USAGI, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်, တောင်တရုတ်ပင်လယ် မုန်တိုင်း USAGI-17W နှင့် မုတ်သုန်လေအခြေအနေ ကြိုတင် ခန့်မှန်းခြင်း
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်(တော်သလင်း လပြည့်နေ့) မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီ – GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်တွင်၊ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်၌ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော မုန်တိုင်း USAGI(17W) တရုတ်(ထိုင်ဝမ်ကျွန်း)တောင်ပိုင်းသို့ ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် မုတ်သုန်အား အနည်းငယ်လျော့ကျနိုင်မည့် အခြေအနေကို တွေ့ရပါသည်။(ပုံ – ၁)
မုန်တိုင်းသည် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင်မီ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတောင်ပိုင်းအား စတင်ဖြတ်ကျော်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၉း၃ဝ နာရီ မတိုင်မီ တရုတ်(ပြည်မ) Guangdong ပြည်နယ် ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ မုန်တိုင်းကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးချိန်တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းနှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့၌ မုတ်သုန်လေအား . . . → Read More: မုန်တိုင်း USAGI-17W နှင့် မုတ်သုန်လေအခြေအနေ ကြိုတင် ခန့်မှန်းခြင်း
Leaveacomment ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မုန်တိုင်းသတင်း 17W, USAGI, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုတ်သုန်လေအခြေအနေ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း USAGI-17W ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
One comment ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 17W, 90W, USAGI, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် LPA-91W
By mmweather.ygn, on September 16th, 2012%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် (LPC-91W) သည် အင်အားအလွန်ကောင်းသည့် စူပါတိုင်မုန်တိုင်း SANBA ၏ အင်အားကြောင့် အရှေ့ဘက်သို့ ရွေ့လျားပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို BAGUIO မြို့တောင်ဘက်မှ ကပ်၍ ဖြတ်သန်းပြီး စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း SANBA ၏ လမ်းကြောင်းနောက်သို့ လိုက်ပါရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
LPC 91W သည် မုန်တိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်အထိ အားကောင်းလာနိုင်ခြေ မရှိသော်လည်း တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပေါ်သို့ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မြို့တော်မနီလာနှင့် အနီးဝန်းကျင်ဒေသများတွင် မိုးသည်းထန်ပြီး ရေလွှမ်းမိုးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
91W – 16 Sep 2012 0000Z Location: 16.4 121.2 Winds: 15 . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် LPA-91W
One comment မုန်တိုင်းသတင်း 17W, 91W, SANBA ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်သို့ ဆက်လက်ဦးတည်လျှက်ရှိသော SANBA
စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း SANBA သည် အိုကီနာဝါကျွန်းအား ဆက်လက်တိုက်ခတ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်းမျက်စေ့သည် အိုကီနာဝါကျွန်း ခုနိဂမိ (Kunigami) မြို့ပေါ်မှ ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၉၃၀ နာရီတွင် အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိကာ၊ ကာဂိုရှီးမားမြို့(Kagoshima) တောင်-အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၂၈၀ ခန့်၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘူဆန်(Busan) မြို့၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၅၀၀ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် မူလခန့်မှန်းထားသည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း(စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် . . . → Read More: ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်သို့ ဆက်လက်ဦးတည်လျှက်ရှိသော SANBA
One comment မုန်တိုင်းသတင်း 17W, KAREN, NW-Pacific, SANBA, super typhoon, TYPHOON အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အိုကီနာဝါကျွန်းအား ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၀ နာရီခွဲတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း SANBA(17W) ၏ အချင်း ၃၅ မိုင်ခန့် ရှိသော မုန်တိုင်းမျက်စေ့သည်၊ အိုကီနာဝါမြို့ နာဟာ လေဆိပ်မှ ၇၅ မိုင်ခန့်သာ ဝေးကွာတော့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အချင်းမိုင် ၅၀၀ ကျော်ရှိသည့် မုန်တိုင်း၏ ရှေ့ပိုင်းမှ တစ်နာရီ ၁၂၅ မိုင်မှ ၁၅၅ မိုင်နှုန်းအထိရှိသော လေပြင်းများ၏ တိုက်ခတ်မှုကို အိုကီနာဝါကျွန်းမှ အိုကီနာဝါမြို့အပါအဝင် နာဂို၊ အုရုမ၊ ကူနိဂါမီ စသည့်မြို့များတွင် ခံစားနေရပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်းသည် အိုကီနာဝါကျွန်းအား ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက် အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်မှ တစ်ဆင့် ၂၄ နာရီနောက်ပိုင်း . . . → Read More: အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အိုကီနာဝါကျွန်းအား ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 17W, KAREN, NW-Pacific, SANBA, super typhoon, TYPHOON Older Entries »